Zavakanto brezilianina: hanolotra seho hafa ry Bloco sy ny Roda Malagasy | NewsMada
Zavakanto brezilianina: hanolotra seho hafa ry Bloco sy ny Roda Malagasy
Anisan’ny endrika iray maneho ny fivelaran’ny zavakanto eo amin’ny firenena iray ny fahaiza-mifehy ny an’ny tena sy fahaiza-manatanteraka ny an’ny hafa. Afaka maneho izany tsara ny Bloco Malagasy sy ny Roda Malagasy.
Tsy zovina amin’ny maro intsony ny Bloco Malagasy, tarika mpively ampongabe, sy ny Roda Malagasy, mpanao “capoera”. Maro ny sehatra efa nahitana azy ireo ary niavaka hatrany izany. Tsy ho latsa-danja amin’ireny ny hotanterahin’ireto tarika roa ireto, ny alakamisy alina izao, eny amin’ny Ravimpontsy eny Tsiadana.
Matetika, hira mandrotsirotsy sy malefadefaka no entina manafana ny fotoana, rehefa manakaiky ny faran’ny herinandro, amin’ny toerana toy ny Ravimpontsy. Amin’ity kosa, azo lazaina ho ny mifanohitra amin’izany ny hitranga, satria feon’amponga, miaraka amin’ny dihy sady fanatanjahantena, “capoera”, no enti-mamalifaly ny vahiny.
Fampisehoana sady fanentanana ny hataon’ny Bloco Malagasy sy ny Roda Malagasy, amin’io alakamisy io, araka ny nambaran’ny mpikarakara. Ny mampiavaka azy, ampifanarahina ny toerana hanaovana ny seho sy ny maha takariva ny fotoana ny famoronana entin’ny tarika roa tonta. Tanjona ny hampiaina ireo vahiny ny kolontsaina sy ny zavakanto brezilianina.
Raha tsiahivina, samy sahanin’ny fikambanana Bel’Avenir, any Toliara, ny Bloco Malagasy sy ny Roda Malagasy. Iry voalohany, ahitana tovovavy marobe, izay samy nianatra ary mahafehy ny fivelesana ampongabe. Ny faharoa kosa, tarika mpanao “capoera”. Samy efa zatra sehatra ary efa nitety firenen-tsamihafa izy ireo.